दशैं राजनीति कि संस्कृति ? «
प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०७५, बुधबार ०७:३५
यतिबेला हिन्दूहरुको महान चाड भनिने बडादशैं सुरु भएको छ । रेडियो, टेलिभिजनमा दशैंको धुन गुन्जिरहेका छन् । पत्रपत्रिकामा दशैंया शुभकामनाले पेज भरिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरुमा दशैंको शुभकामना आदानप्रदान भईरहेको देख्न सकिन्छ । लाखौ निर्दोष प्राणीहरुलाई बली दिएर मनाईने पर्वमा समेत मान्छेहरु बुझेर या नबुझेर ब्यर्थको शान्ति अलापीरहेका छन् । अनावश्यक खर्च, तडकभडक, आक्रमक शैलीको प्रचारप्रसार र चहलपहलको हिसावले नेपालमा मानिने पर्वहरु मध्येकै सबैभन्दा ठूलो पर्व बडादशैं नै हो । त्यसैले त यसले राष्ट्रिय पर्व र बडापर्वको पदवी पायो । आधुनिक नेपालको विस्तार अघि यो पर्व बडापर्वको रुपमा स्थापित भएको कहिं कतै पाईदैन । त्यसताका यहाँका रैथाने जातिहरु उद्यौली उभौली, ल्होछार, लोसार, माघी, माघे संक्रान्ति जस्ता मौलिक संस्कृतिमा आधारित पर्वहरु मान्दथे । तर राज्यसत्ताको श्रीपेच जुन समुदायको सर्दारहरुले लगाए, दशैं पनि उसँगसँगै उदाएको इतिहास छ । कुनै राजनीतिक घटनाक्रमपछि उदाउने संस्कार र यस्ता पर्वहरु राजनीतिक हो कि साँस्कृतिक हो ? यो हामीले बुझ्नुपर्दछ । ढिलै भएपनि पछिल्लो चरणमा यस सम्बन्धि बहसको प्रारम्भ भएको छ । कुनैपनि पर्व राजनीति हो कि संस्कृति हो भन्ने कुराको निक्र्यौल यसको सुरुवाती इतिहास अध्ययनबाट निर्धारण गर्न सकिने कुरा हो । कुन प्रसँगबाट त्यो पर्व मान्न थालियो भन्ने ऐतिहासिक पक्षलाई बुझेर मात्र राजनीति वा संस्कृतिको टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।
त्यसकारण दशैं नितान्त राजनीतिक पर्व हो । जसलाई शासकहरुले काल्पनिक हिन्दू जीवन दर्शनको मुख्य आधार पर्वको रुपमा स्थापित गरे । कतिपय रैथाने सभ्यताले विकास गरेको मान्यतालाई पनि उनीहरुले यसमा मिसाईदिएका छन् । जस्तोः दशैंमा टीका लगाइसकेपछि टुसा आउने जमरालाई कानमा सिउरिदिन्छन् । जमरा रैथाने सभ्यताले विकास गरेको परम्परा हो । यस्तो छ्यासमिस देखेपछि हामी रनभुल्लमा पर्छौ र सामान्य चेतनाहरु जाँडको तालमा हाम्रै पर्व हो भन्दै बुरुक्क उफ्रिन्छन् । तर फिरन्ते जीवन दर्शनले त्यतिसम्म ग्रहण गर्छ जतिले उसलाई घाटा हुँदैन, अर्थात उसको मूल सिद्धान्तलाई बिगार्दैन । अरुलाई भ्रमित पार्नु र अन्तत अरुको अस्तित्वलाई सिध्याउनु घुमुवाहरुको कर्म (काम) हो । किनकि अरुमाथि हावी नभई बाहिरिया जीवन प्रणाली नयाँ ठाउँमा बाँच्नै सक्दैन । यसको जीन नै माकुराको जस्तो हुन्छ । जसले माउँ पक्षलाई खाएर मात्र हुर्कन्छ । यस्ता दर्शनशास्त्रीय पक्षलाई बुझ्न हामीले न मान्छे मान्छे एकै हो भन्ने गीत गाएर हुन्छ न मान्छेको दुई जात मात्रै हो भन्ने सर्वहारा नारा उरालेर नै हुन्छ । त्यसैले धर्म होइन, दर्शनलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौ । अन्तमा, हिन्दूहरुको पर्व दशैंको समस्त हिन्दूजनमा शुभकामना । धन्यवाद ।।